Global Voices teny Malagasy · 18 Febroary 2010
18 Febroary 2010
Septambra 2021 47 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 18 Febroary 2010
Hoy ny mpamahambolongana Amerikana momba ny fangalaran-jaza kamboty Haisiana
Amerika Avaratra18 Febroary 2010
Raha eo andalam-panarenana sy fanorenana i Haiti, dia misy indray ny fanahiana ny mikasika ny kilonga indrindra moa fa ny kamboty. Efa maro ny tatitra momba fitadiavan'ireo mpanondran-jaza mitady kilonga marefo fiarovana, ary anisan'izany ity vaovao navoakan'ny CNN ity. Misy fifandraisana betsaka amin'i Etazonia ny momba ny kamboty satria Amerikana...
Mampiseho ireo hitsara amin'ny fifaninana Breaking Borders momba ny fahalalahana miteny ny Global Voices sy ny Google
Fahalalahàna miteny18 Febroary 2010
Ny Breaking Borders dia loka vaovao noforonin'ny Google sy ny Global Voices ary tohanan'ny vondrona Thomson Reuters mba hanomezam-boninahitra ireo tetikasa tsara indrindra ataon'olo-tsotra na fikambanan'olona nampiseho fahasahiana, fahavitrihana ary fahatsilovan-tsaina amin'ny fampiasana aterineto ho fampiroboroboana ny fahalalahana amin'ny alalan'ny tranonkala. Faly izahay mampahafantatra ireo mpitsara amin'ity fifaninanana ity. Misy...
Kenya: Fa inona ity nataon'ilay Mpanolotra TV fivavahana ity?
Tselatra · Kenyà18 Febroary 2010
“Nalaza dia nalaza tokoa ny nataon'ity mpanolotra fandaharana amin'ny televizionam-pivavahana iray ity raha niampanga ny fianakaviany ny anao vavy, nandao ny fofombadiny ary niala tamin'ny asany noho ny baiko tamin'ny alalan'ny imailaka nataona televanjelisitra amerikana iray azy,” hoy ny notaterin'ny Hot Secrets. Ndesanjo Macha
Rosia: Ny atao amin'ny boky antitra
Tselatra · Rosia18 Febroary 2010
Manary ny boky noho ny fahanterany sy tsy fisian'ny mpamaky azy intsony ny trano famakiam-boky maro, hoy ny mpanao tsikera literera Alexander Zhitinski [RUS]. Ny an'ny trano famakiam-boky iray any Saint-Petersburg aza dia ny boky rehetra nivoaka talohan'ny taona 1999 no nariany. Niteraka adihevitra an-tserasera [RUS] moa izao tsy fanajana...